Chile: Hafatra Ara-politika Tamin’ny Lahatsary Mozika Antserasera Nampitabataba Ny Vahoaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jona 2017 15:30 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra efa nivoaka tamin'ny volana Mey 2008 ity adika eto ity)
SubVerso (SubVerse) no anarana artistikan'i Vicente Durán, mpanoratra ny Inform Yourself (Ampahafantarinao Anao), hira sy lahatsary Hip-hop mitsikera politika izay alefa indrindra ao amin'ny aterineto, ary niteraka tabataba teo amin'ny fiarahamonina Shiliana sy niteraka fanehoan-kevitra marobe, izay samy manohana ny hafatra ampitainy amin'ny fampahafantaranao anao fa tsy mijery vaovao amin'ny fahitalavitra araka izay aseho, ary ny hafa kosa manohitra ireo tononkira sasany izay milaza amin'ny olona hitora-bato ny varavarankelin'ny orinasa vahiny ho fomba fanoherana. Azo jerena ny tononkira feno [es]. Ity sombiny miresaka momba ny filoha ao Chile, Michelle Bachelet, nadika tamin'ny teny Anglisy:
Mahafantatra izany tsara i Bachelet satria nianatra avy amin'ny Amerikana niaraka tamin'ireo miaramila tao Etazonia izy. Nahazo diplaoma momba ny fiarovana sy ny filaminam-pirenena izy, ka aza manaiky hofitahana amin'izany endrika fitaka maha-reny izany.
Mahazatra ny ADN-ny, miaramila sy mpibaiko, na dia tsy mahavita azy aza izy, dia nanangana ekipa matanjaka mba hitifitra ny fahavalo ao anatiny, izay tsy mpangalatra akanjo telo miaraka fa ny rahavavinao, ny mpifanolo-bodirindrina aminao sy ny zanakao madinika no tena mpangalatra.
Mampianatra anao amin'ireto andininy ireto izay mitovy amiko, izaho SubVerso, amin'izay ianao tsy manao hadalana, tahaka ny nitranga tamin'ny tantaran'ny «frômazy». Raha te hihena ianao, esory ny lanjan'ny fatotra ary andeha vakio ny varavarankelin'ireo orinasa vahiny.
Ampahafantaronao anao izay tokony atao alohan'ny anasan'ny fahitalavitra ny lohanao, mamakia sy mianara eny an-dalana. Aleon'ny mpanankarena mahita anao dondrona ka hanafina ny torohay hanandevozana anao.
Ny Inform Yourself dia mety ho We didn´t start the fire na [tsy izahay no nanomboka ny tifitra (afo)] an'i Billy Joel, Shiliana, feno anarana, toerana sy tranga mikasika ny toe-draharaha politika ankehitriny ao Chile. Nivoaka ity lahatsary ity raha nanomboka ny fitokonana tsy hihinankanina 111 andro i Patricia Troncoso ho fiarovana ny zon'ny Tompotany Mapuche, tantara lava indrindra ao Chile efa hifarana ary narahin'ny famonoan'ny Tafika Polisy Manokana ao Chile an'ilay mpikatroka sy mpianatra Mapuche Matías Catrileo.
Tamin'ny resadresaka niarahan'i Sebastián Larraín Saá tamin'i SubVerso [es] i Vicente Durán manazava ny fomba niarahan'ny olona nanangana ny lahatsary izay nampiditra ny votoaty tao amin'ny YouTube, ary ny heviny dia ny hiampanga mazava ny kolikoly ao Chile, mampiasa ny ohatra avy amin'ny tena fiainana fa tsy manao filazana takotakona fotsiny mikasika ny zava-mitranga: fa ny nataony kosa dia mampiasa anarana sy ny zava-nitranga, amin'izay afaka mijery sy manamarina ary mampahafantatra ny tenan'izy ireo ny mpihaino.
Ny lahatsary Inform Yourself [es], nampidirin'ny conspirazion, fikambanana misy an'i SubVerso:
Nandefa mivantana ny zava-nitranga tamin'ny 6 Martsa teo anoloan'ny trano Londra 38, toerana fampijaliana sy fanagadrana ao afovoan-tanànan'i Santiago, tantanin'ny Polisy Miafina Shiliana nandritra ny fitondrana Pinochet i SubVerso. Nokarakarain'ny Memoria 119 [es] ny fampisehoana, fikambanana izay maniry hamerina ity trano ity ho “trano fahatsiarovana” mba hanomezam-boninahitra ireo niharam-boina tamin'ny fampijaliana feno herisetra niseho. Nampidirin'i pavelaravena ny fampisehoan'i SubVerso:
Nanatevin-daharana ireo mpanakanto Hip-hop ao an-tanindrazany ao Villa Francia izay anisan'ny vondrona CoN$PiRaZioN i SubVerso ary namokatra kapila mangilatra, Apaga la tele (Vonoy ny Tele) izay azo trohana maimaimpoana ao amin'ny pejy MySpacen'ny vondrona izy ireo.